Tsy mahalala menatra io ô! | NewsMada
Tsy mahalala menatra io ô!
Par Taratra sur 09/07/2019
Mbola ambentin-dresaky ny olona rehetra, na vavy na lahy, na lehibe na kely, na avy aiza na avy aiza, ny fandresena miezinezina azon’ny Barean’i Madagasikara, tamin’ny “Can 2019”, ny alahady lasa teo. Nampiray hina ny Malagasy rehetra ny mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara. Tsy nahitana fanavakavahana fa hitan’izao tontolo izao fa iray tokoa ny Malagasy. Anisan’ny nampisongadina toe-javatra iray tao anatin’ny fotoana fohy ihany koa ny fahombiazan’ny Barean’i Madagasikara.
Nalaza vetivety ilay hiran’ny zazakanto hoe: “Tsy mahalala menatra io ô”. Nanakoako tany Egypta, isaky ny mahazo fandresena, io hira io, ary ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara mihitsy no mivazo sy mihiakiaka izany. Ampitainy amin’ireo Malagasy vitsy anisa, manao mpamosavy malemy ka manozona hatrany ny Barean’i Madagasikara, amin’ireo lalao rehetra nataony.
Amin’izao fotoana izao, tsy misy toy ny Malagasy. Na eo aza ireo tsy mahalala menatra, tsy misy intsony, na iray aza, afaka hamafa ny zava-bitan’ny Barean’i Madagasikara. Efa fanta-daza, ary tsara laza, manerana izao tontolo izao, i Madagasikara. Tsy misy mahavita fa ny Barean’i Madagasikara irery ny afaka nampivondrona ireo mpiray tanindrazana tsy nitovy hevitra, na ny teto ny an-tanindrazana na ireo Malagasy any andafin’ny riaka. Nasehon’ny Barean’i Madagasikara fa tsy mahalala menatra ireo efa zatra ny manava-tena sy miala amin’ny maro.
Nanala ny hirifirin’ny ririnina sy ny hamafin’ny fiainana, na ho amin’ity “Can 2019” ity ihany aza, ho an’ireo vahoaka antapitrisany, ny vokatra vitan’ny Barean’i Madagasikara. Ankehitriny, tsapa fa mifankatia ny Malagasy ary tsy matahotra ireo mpamendrofendro intsony. Afaka handroso miaraka ka sahy hihirahira mafy hoe: “Tsy mahalala menatra io ô”.